सब भन्दा प्रसिद्ध सामग्री खनन र वेब डेटा स्क्र्यापिंग उपकरणहरूसँग परिचित हुनुहोस् जसले हाम्रो समय बचत गर्नेछ - Semalt समीक्षा
वेब स्क्र्यापिंग उपकरणहरू वेबसाइटहरूबाट अर्थपूर्ण जानकारी स gather्कलन गर्न डिजाइन गरिएको हो। तिनीहरूले जाभा, C ++, पाइथन, रूबी, साथै अन्य प्रोग्रामिंग भाषाहरूमा उनीहरूका कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछन्। केहि वेब स्क्र्यापिंग र सामग्री खनन सेवाहरू तपाईंलाई सेकेन्डमा सटीक र त्रुटि-मुक्त डाटा प्राप्त गर्न पर्याप्त शान्त छन्। केहि धेरै अविश्वसनीय अनुप्रयोगहरू तल छलफल गरिएको छ:
१. स्क्रिन स्क्रेपर
यो नेट मा एक उत्तम र सब भन्दा प्रसिद्ध सामग्री खनन उपकरण हो। स्क्रीन Scraper सटीक डाटा निकासी र नेभिगेसन सम्बन्धित धेरै कार्यहरू tackles। तपाईं यस उपकरण मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंसँग पर्याप्त टोकनाइजेसन वा प्रोग्रामिंग सीप छ। सफ्टवेयर लन्च सरलता नै हो। तपाईंले भर्खर यसलाई डाउनलोड र सक्रिय गर्नुपर्नेछ, तपाईंको प्रोक्सी थप्नुहोस् र तपाईंको कार्यहरूको सूची रेकर्ड सुरू गर्नुहोस्। यो उपकरणले कोडको मद्दतले विभिन्न निकासी बान्कीहरू सिर्जना गर्दछ र दुबै जाभास्क्रिप्ट र HTML का साथ काम गर्दछ। स्क्रिन स्क्रेपरको उत्तम विशेषता यो हो कि यो प्रयोग गर्न सजिलो छ र तपाईंको सिट्रिक्स प्लेटफर्मको साथ सहजै परीक्षण गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, यस सेवाले हामीलाई साधारण स्क्रिप्टहरू लेख्न मद्दत गर्दछ र हामीलाई पाठ, एक्सेल, र CSV ढाँचाहरूमा झिकिएको जानकारी डाउनलोड गर्न दिन्छ।
यो एक सबै भन्दा उपयोगी र अविश्वसनीय डाटा निकासी सेवा हो जुन हाम्रो समय बचाउनेछ। Import.io एक व्यापक, नि: शुल्क डेस्कटप अनुप्रयोग हो जुन असीमित संख्याका साइटहरू र ब्लगहरूबाट उपयोगी डाटा स्क्र्याप गर्न मद्दत गर्दछ। यो सेवाले हाम्रा वेब पृष्ठहरूलाई सम्भावित डेटा स्रोतबाट APIs उत्पन्न गर्न व्यवहार गर्दछ। यसैले यसले हाम्रो समय बचत गर्दछ र ब्यापारहरू र ठूला उद्यमहरूका लागि उपयुक्त छ। Import.io ले पृष्ठहरू प्रक्रिया गर्दैन जुन तपाईंले पहिले प्रक्रिया गर्नुभएको थियो। Import.io को एकमात्र नुकसान यो हो कि यो एक साइटबाट अर्कोमा नेभिगेट गर्न असमर्थ छ। यसको मतलब तपाईंले यूआरएलहरू सम्मिलित गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं म्यानुअलीबाट डाटा निकाल्न चाहनुहुन्छ।
यो एक नयाँ डेटा स्क्र्यापिंग सेवा हो। Uipath आफ्नो प्रयोगकर्ताहरूको लागि डाटा र खनन सामग्री स्क्र्याप गर्नमा माहिर छ। यो एक पटकमा धेरै कार्यहरू गर्न सक्दछ र दुवै कोडरहरू र गैर कोडरहरूको लागि उपयुक्त छ। साथै, यस कार्यक्रमसँग उत्कृष्ट पृष्ठ नेभिगेसन सुविधाहरू छन् र तपाईंको पीडीएफ फाईलहरू स्क्र्याप गर्न सक्दछन्, तपाईंलाई मनपर्ने परिणामहरू प्राप्त गर्दै र डाटा एक्सट्रेसनमा तपाईंको समय बचत गर्न। तपाईंले भर्खरै मात्र विजार्ड खोल्न आवश्यक छ, यूआरएल उल्लेख गर्नुहोस् जुन तपाईं डाटा स्क्र्याप गर्न चाहानुहुन्छ र युआईपाथले यसको प्रकार्य प्रदर्शन गर्न सुरू गर्दछ। यस अनुप्रयोगले सजिलै फ्ल्यासको माध्यमबाट खुदाउँदछ र तपाईंलाई केही मिनेट भित्रै पढ्न योग्य र स्केलेबल डेटा हुन्छ। तपाईं सफा CSV र एक्सेल कागजातहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एक प्रीमियम प्रोग्राम हुनाले, यूआईपाथ स्टार्टअपका लागि उपयुक्त हुँदैन किनकि यो थोरै मूल्यवान छ।
Kim. किमोनो ल्याबहरू
किमोनो ल्याब्स प्रोग्रामर, पत्रकार, फ्रीलांसरहरू, वेबमास्टरहरू, उद्यमहरू, र गैर-तकनीकी व्यक्तिहरूको पहिलो विकल्प हो। यसले एकै समयमा धेरै डाटा स्क्र्यापि and र सामग्री खनन कार्यहरू गर्दछ। यो उपकरण प्रत्यक्ष डेटा निकासी सुविधा द्वारा संचालित छ, जसले तपाईंलाई डाटाको गुणवत्ता देख्न वा अनुगमन गर्न दिन्छ जबकि यसलाई स्क्र्याप भइरहेको छ। साथै, किमोनो ल्याबहरू लगभग सबै वेब ब्राउजरहरू र अपरेटि systems प्रणालीहरूको साथ उपयुक्त छ। यसले कुनै पनि पृष्ठ नेभिगेसन सुविधा प्रदान गर्दैन, र तपाईले केमोनो ल्याबहरूलाई तालिम दिन केहि समय खर्च गर्नुपर्नेछ डाटालाई इच्छित ढाँचामा बाहिर निकाल्न अघि।